Ny vokatra Apple no be mpitia indrindra tamin'ny Zoma Mainty | Vaovao IPhone
Araka ny efa fantatrareo, ny zoma lasa teo dia orinasa sy fivarotana maro no nankalaza izany Zoma Mainty, andro iray izay midina be ny vidin'ny vokatra hanasana antsika hividy. Ny vokatra Apple dia vokatra tsy ambany ny vidiny, saingy zavatra miova amin'ny "Black Friday", izay nanolorana Apple TV 4 iray hividianana MacBook (tsy haiko tsara hoe iza amin'izy ireo), eo zavatra hafa. Miaraka amin'ireo vidiny vaovao ireo, Ny vokatra Apple no be mpitady indrindra amin'ny Zoma Mainty 2015 any amin'ny magazay Target, izay no voalohany nanome data momba an'io.
Anisan'ireo vokatra 10 tadiavina be indrindra amin'ny Tarjet amin'ny Zoma Mainty misy ny iPad sy Apple Watch izahay. Ny iPad no vokatra Cupertino novidina be indrindra ary Forbes hoy izy iPad iray amidy isan-tsegondra Alakamisy lasa teo. Ny Apple Watch koa notadiavina fatratra, fa any amin'ny magazay ara-batana. Vokatra iray hafa koa izay nivarotra betsaka dia ny Beats Solo 2, vokatra iray izay tafiditra ao amin'ny katalaogin'i Apple hatramin'ny nahazoany Beats Electronics.
Raha ny momba ny vokatra tsy Apple dia manana ny lazany ihany koa ireo console, na amin'ny magazay ara-batana na amin'ny fivarotana an-tserasera, dia ny Wii U amin'ny vokatra folo tadiavina indrindra. Liana tamin'ny fahita lavitra ihany koa ireo mpampiasa ary nanararaotra ny fihenan'ny vidiny mba hividianana fahitalavitra somary lehibe kokoa amin'ny vidiny mitovy amin'izany. Vokatra iray hafa amin'ny be mpividy indrindra ny sarimihetsika, misy 3 tapitrisa mahery novidina. Ny vokatra hafa tadiavina dia ny teddy bear misy 60cm eo ho eo sy karazana kilalao hafa, toa ny LEGO, Barbie, andriambavy Disney ary saribakoly Star Wars, ity farany nahatratra 30% tamin'ny varotra kilalao tanteraka.
Raha mieritreritra ny hividy zavatra ianao dia aleo miandry rahampitso. Tahaka ny nankafizinay ny Zoma Mainty, rahampitso alatsinainy no Cyber ​​Monday ary hisy ny vokatra milatsaka amin'ny vidiny, na dia misy maro hafa aza mihena ny vidiny mandritra ny faran'ny herinandro sy hatramin'ny alatsinainy alina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny vokatra Apple no be mpitia indrindra tamin'ny Black Friday 2015, hoy ny Target.com